Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalkii Gaza ee Hadafkiisu ahaa Jabinta Iraadada Iska Caabinta ree-Falastin Waxaa Fashiliyay -Daawo
Dagaalkii Gaza ee Hadafkiisu ahaa Jabinta Iraadada Iska Caabinta ree-Falastin Waxaa Fashiliyay -Daawo
Posted by ONA Admin	/ August 2, 2014
Dagaalka lagu qaaday shacabka Gaza hadafkiisa 1aad wuxuu ahaa in la jabiyo casiimada iyo adkaysiga shacabka Falastiin ee Gaza daga. Wuxuuna ahaa dagaal shacabka lagu qaaday ee ma’ahayn dagaal muqaawamada ama ciidanka Xamaas ee loo yaqaano Cizadiin Al-Qasam lagu qaaday. Istraatiijiyada Israa’il wuxuu ahaa inay shacabka aad u layso oo shacabka uu is-dhiibo oo ka horyimaado muqaawamada. Waa hadaf Isticmaari ah, hasa ahaatee aan meelna ku guulaysan.
Caqliga gumaysiga waligiiba wuxuu ku dhisan yahay –Hadaad i diido waan ku dili, Hadaad i ogolaatana waan ku Dulaysan -, arintaana waxaa diida oo ka dhiidhiya dhalinyarada umadaasi. Diidmadaa ka dib, wuxuu bilaabaa gumaysiga inuu laayo shacabka oo aanu kala reebin mid ogolaaday iyo mid gumaysigiisa diiday toona. Maadaama aanu gumaysigu ka adkaan karin dhalinyarada muqaawamada ama halgamaysa, wuxuu ku talagalayaa inuu shacabka ka horkeeno marka uu si naxariisdarra ah u laayo. Dagaalka ka socda Gaza waa midkaa, hasa ahaatee natiijadii ay ka filaysay Israa’il kama aanay gaadhin, waxayna keentay inuu shacabkii Gaza oo ah shacab nool go’aansado geerida iyagoon taagin gacmaha.
Hoos waxaad ka daawan nin loo keenay maydkii wiilkiisa oo ka tirsanaa muqaawamada oo ugu hambalyaynaya wiilkiisa maydka ah inuu noqday Shahiid, isagiina loogu hambalyaynayo inuu dhalay shahiidkaa. Waa filim qofkii iimaan leh oo garanaya darajada Shahiidka iyo qiimaha xoriyadda uu ku cibrad qaadanayo.